R/wasaare HaileMariam: DDSI Wuxuu Kusocdaa Horumar Xawli Ah, Jaaliyaadku Waa Inay Kaalintooda Labajibaaraan, Kana Faaidaystaan Oo Ay Maalgashadaan Dalka iyo Deegaankoodaba. - Cakaara News
R/wasaare HaileMariam: DDSI Wuxuu Kusocdaa Horumar Xawli Ah, Jaaliyaadku Waa Inay Kaalintooda Labajibaaraan, Kana Faaidaystaan Oo Ay Maalgashadaan Dalka iyo Deegaankoodaba.
Jabuuti(CN) Arbaco.Feb.11.2015, Sida aan wada ogsoonahay istaraatiijiyadaha horumarineed ee dalka Itoobiya waxay kamid yihiin kuwa u horseeday dibloomaaiyada sare iyo xidhiidhka dawaynaha ee dalka iyo dibadaba. Wuxuuna dalka Itoobiya wakhti xaadirkan noqday xarunta ama saldhiga dibloomaasiyad badan oo caalamka ah, iyadoo uu dalku yahay xarunta ama saldhiga midowga Qaardadani Afrika.
Hadaba raysal wasaaraha DFI mudane Hailemariam Desalegn ayaa booqashadiisii dalka jaarka ah ee Jabuuti uu kutagay dhawaanta waxaa uu kulan balaadhan kulayeeshay jaaliaaydka reer Itoobiya ee kudhaqan dalka aan jaarka nahay ee Jabuuti. Wuxuuna raysal wasaaruhu si fool-ka-fool ah kulamo ulayeeshay jaaliyadaha reer Itoobiya ee dalkaasi kudhaqan. Halkaas oo raysal wasaaruhu uga warbixiyay qorshayaasha horumar ee dalka iyo deeganada islamarkaana ay shacbkii jaaliyaaduna dareenkooda kasoo jeediyeen.
Kulankan oo ay raysalwasaaraha iyo jaaliyaadka reer Itoobiya sigaar ah uga wada hadleen horumarka dalka, ayuu R/wasaare Hailemariam Desalegn uga warbixiyay xaalada uu maanta dalku marayo isagoo sheegay in isbadal xawli ah laga gaadhay qorshayaasha horumarineed ee dalka.
R/wasaaruhu waxaa uu sheegay in hayaanka horumar iyo isbadal ee Itoobiya gaar ahaan horumarka iyo nabadgaliyada ay iskuxidhanyihiin xidhiidh wanaagsan ee dalalka jaarka ah iyo guud ahaanba caalamka. Wuxuuna raysal wasaaruhu sheegay in shacabka reer Itoobiya ay Itoobiyaanimadooda ku adagyihiin oo ay maanta kafaaidaysanayaan xaalada isbadal ee uu wadanku gaadhay.
Mar uu raysal wasaaruhu uga warbixinayay jaaliyaadka reer Itoobiya deegaanka Soomaalida Itoobiya ayuu sheegay in DDSI uu kasocdo horumar xawli ah “Yegasegase” hadal micnihiisu yahay horumarka deegaanku wuxuu u socdaa sida faraska aadka u dheereeya oo xawli kusocda. Wuxuuna raysal wasaaruhu u sheegay shacabkaasi in ay si balaadhan uga faaidaystaan deegaankooda oo ay maal gashadaan maadama uu maanta deegaanku nabadgaliyada meel saaray horumarka oo xawli kusocdana loo jihaystay.
Dhanka kale xubnihii jaaliyaadku waxaa ay sheegeen oo ay ka makhraati kaceen isbadalka dalka gaar ahaan jaaliyaadka u dhashay DDSI waxay ka makhraati kaceen isbadalka deegaanka maanta kajira iyo guulaha nabadgaliyada iyo horumarka lagasoo hoyiyay. Waxayna xubnahaasi sheegeen in xal waara laga gaadhay marxaladihii uu deegaanku soomaray kuwaas oo gaar ahaan dhib wayn ku ahaa jaaliyadaha u dhashay DDSI balse maanta in ay kufaantamayaan Itoobiyaanimada oo ay kaalin hormuud kaga jiraan. Sidoo kale waxaa ay sheegeen in xidhiidhka labada dal uu yahay mid walaaltinimo oo iskuxidhan.
Raysal wasaare Hailemariam ayaa uga balan qaaday in jaaliyaadka iyo shacabka kudhaqan Jabuuti ee Itoobiyaanka ah loo abuuri doono xaalado kacaawin doona dhanka waxbarashada iyo dhanka luuqadaha ee dalka Itoobiya. Wuxuuna raysal wasaaruhu sheegay in shacabka reer Itoobiya ee dalalka jaarka ah iyo qurbahaba ay kaalintooda sii laba jibaaraan kaqayb qaadashada hayaanka dib u curasho ee wadanka.